रोचक बिचित्र – Page6– JanaSanchar.com
यी हुन् मनोचिकित्सक डाक्टर सारा ह्वाइट जो २४ बर्षकी छिन् । उनी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्छिन् । यी चिकित्सकको उपचार गर्ने तरिका एकदमै फरक छ । उनी नग्न भएर बिरामीको मनोभाव बुझेर उपचार गर्दछिन् । जसका कारण उनीसँग उपचार गराउनेहरूको ठूलो लाइन नै लाग्ने गर्दछ । उनले अस्पतालमा बोलाएर होइन अनलाईनबाट उपचार गर्ने गर्छिन् । उपचार गर्ने यस्तो..
बलात्कार पीडित महिलाका कपडाको प्रदर्शनी !
महिलाहरुमाथि हुने बलात्कार तथा अन्य खाले यौनहिंसामा उनीहरुले लगाउने भडि्कला पहिरनको पनि भूमिका रहने गरेको कतिपयको भनाई रहने गरेको छ । सायद यहीँ मान्यतालाई तोड्नका लागि बेल्जियममा एक अनौठो प्रदर्शनीको आयोजना भएको छ । बेल्जियममा बलात्कार पीडित महिलाका कपडाको प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको छ । बलात्कार पीडित महिलाले बलात्कारको समयमा..
जब मेट्रो रेलमा एकाएक भरिए पाइन्ट फुकालेका ठिटाठिटीहरु (फोटोफिचर सहित)
विश्वभरका ६० वटा सहरमा जनवरी ७ का दिन पाइन्ट नलगाइकन मेट्रो रेलको यात्रा गर्ने ‘नो प्यान्ट सबवे राइड डे’ मनाइयो । दिवसका अवसरमा हजारौँ युवायुवतीहरु कट्टु तथा अण्डरवेयरमै मेट्रोमा यात्रा गरे । वर्षेनी मनाइने यो पटकको दिवस सत्रौं हो । पाइन्ट नलगाइकन रेलमा यात्रा गर्ने दिवस मनाउनका लागि तन्नेरीहरुले उत्तरी गोलार्धको चीसो मौसमको पनि..
यौनाङ्ग गोरो बनाउने चक्करमा युवायुवती, आखिर केका लागि ?
एशियाली देशहरुमा कालो छालालाई सुन्दर मानिँदैन । त्यसैले आफ्नो छालालाई गोरो बनाउन युवायुवतीहरु अनेकन उपायहरु लगाउँछन् । थाइल्याण्डमा भने हदै भएको छ । त्यहाँका पुरुषहरु आफ्नो गुप्ताङ्ग गोरो बनाउने चक्करमा क्लिनिक धाउन थालेका छन् । यतिसम्म कि सरकारले नै यसका विरुद्धमा चेतावनी जारी गर्नुपरेको छ । बीबीसी थाई सेवाले यस कार्यमा संलग्न..
जानिराख्नुहोस सपनामा सेक्स गरेको देखे के हुन्छ?
भनिन्छ वास्तविक जिवनमा पाउन नसकेका वा दबाएर राखेका इच्छाहरु सपनामा प्रस्फुटित हुन्छन् । यसैगरी दबेर रहेका यौनइच्छा पनि सपनामा छताछुल्ल हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनले अधिकांस युवायुवतिहरु यस्तो सपना देख्न चाहन्छन् जहाँ उनीहरुको आफ्नो पि्रयजनसँग भेट होओस् र यौनक्रिडा गर्न पाइयोस् । त्यसैले सपनामा कोहीसँग सम्भोग गरेको देख्नुलाई सामान्य..
गर्भनिरोधका लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन कण्डमको आविष्कार कहिले भएको होला ? यो चासो धेरैको हुनसक्छ । इतिहास खोतल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले फ्रान्सको एक गुफामा कण्डम आकारको चित्र फेला परेको थियो । उक्त चित्र १५ हजार वर्ष पूरानो भएको बताइन्छ । विश्वको सबैभन्दा पूरानो कण्डम भने स्वीडेनमा फेला परेको छ । अहिले कण्डम सजिलैसँग..
ताइवानमा एक हैरान लाग्ने घटना सार्वजनिक भएको छ । एकजना व्यक्तिलाई यस्तो हालतमा अस्पतालमा ल्याइयो कि जसलाई देख्दैमा सबै अचम्ममा परे । तर, वास्तवमा ती मानिसमाथि जुन बज्रपात भएर अस्पताल ल्याइएको थियो , त्यो थाहा पाउँदा डाक्टरहरु नै झसँग भए । द सन पत्रिकाको रिपोर्ट अनुसार ती व्यक्ति आफ्नी पत्नीसँग सहवास गरिरहेका रहेछन् । त्यहीँ बेला उनकी..
हुन त जोडीले आफ्नो मायाका पलहरु सोसल मिडियामा सेयर गरिरहन्छन् तर यो जोडीको लभ फोटोसुट भने तिब्र रुपमा भाइरल भयाे । यी अमेरिकी जोडीको फोटोसुट केहि पहिले एक एजेन्सीले गरेको हो र यसलाई फेसबुकमा अपलोड गरियो जसलाई ८५ हजार बढीले सेयर गरे । के थियो यसको कारण ? यो एक अमेरिकी जोडी स्टेफनी र आर्नको फोटोसुट हो जसलाई ‘ब्रिया टेरी अफ वुल्फ एण्ड रोज..
काठमाडौं । भारतकी एक युवतीले यस्तो पेन्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई बलात्कारबाट बचाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रेप प्रुफ पेन्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले बलात्कारबाछ बचाउनसक्छ । ब्लेड प्रुफ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई काट्न वा..